Soomaali laga soo tarxiilay Mareykanka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Soomaali laga soo tarxiilay Mareykanka
In ka badan 70 Qof ayaa diyaarad siday ay kasoo duushay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ka dib markii Mareykanka uu go’aansaday in dadkaasi dib loogu celiyo Soomaaliya ka dib markii lagu helay eedeymo kala duwan.
Dadkaan ayaa laga soo dejin doona Garoonka Diyaaradaha Jomo Kenyatta ee Magaalada Nairobi dalka Kenya ka dibna waxa loo soo gudbin doona Muqdisho.
Dowladda Mareykanka wali ma shaacin sababta rasmiga ee dadkaasi lasoo masoo furiyay iyo rag iyo dumar waxa ay kala yihiin.
Tan iyo markii uu xilka la wareegay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa Soomaaliya dib loogu celiyay oo la masaafuriyay boqollaal Soomaali ah.
Todobaatankaan qof ayaa soo tarxiili doodo kusoo beegmay xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin wareejinta xilka Madaxweynaha Trump.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Uganda
Next articleDHAGEYSO: Warka Habeen 15-1-2021